ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မှန်မှန်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရေး UEC မှ လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြလာ – Myanmar Media
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မှန်မှန်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရေး UEC မှ လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြလာ
ရွေးကောက်ပွဲအကြို ရလဒ်များအား ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် ကြေညာသည်။ ဗဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ၊
အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းများ၊ အောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းများကို ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက် နှစ်ပတ်အတွင်း ပြည်သူလူထုအား ကြေညာရသည်။
တာဂျစ်ကစ္စတန်သမ္မတနိုင်ငံသည် အခြားအာရှအလယ် ပိုင်းနိုင်ငံများနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံများကဲ့သို့ ခိုင်မာသော သမ္မတစနစ် ရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ သမ္မတ Emomali Rahmon သည် ပြည်တွင်းစစ်ကာလဖြစ်သော ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ သမ္မတအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သမ္မတသက်တမ်းအား ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်သို့ တိုးမြှင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှ စတင်အကျုံးဝင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက် ပွဲ၂၀၁၃ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် သမ္မတရွေးကောက် ပွဲများတွင်
ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ သမ္မတ Emomali Rahmon ကသာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါလီမန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် နေရာအများဆုံး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တစ်ပါတီစနစ် လွှမ်းမိုးမှု ရှိသော်လည်း သမ္မတအား အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေ ပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များက . အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုရှိခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အများယုံကြည် လက်ခံမှုရှိခြင်း၊
ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသည့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှုစနစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက် ရှိပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မှန်မှန်လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မွန္မွန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရး UEC မွ ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပလာ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ရလဒ္မ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာသည္။ ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား၊
အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမ်ား၊ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမ်ားကို ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအား ေၾကညာရသည္။
တာဂ်စ္ကစၥတန္သမၼတႏိုင္ငံသည္ အျခားအာရွအလယ္ ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ သမၼတစနစ္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတ Emomali Rahmon သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလျဖစ္ေသာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သမၼတအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတသက္တမ္းအား ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ စတင္အက်ဳံးဝင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ ပြဲ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္
ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတ Emomali Rahmon ကသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ပါတီစနစ္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေသာ္လည္း သမၼတအား အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားက . အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အမ်ားယုံၾကည္ လက္ခံမႈရွိျခင္း၊
ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆုံးသည့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မွန္မွန္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။
Tagsဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မှန်မှန်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရေး UEC မှ လေ့လာသုံးသပ် တင်ပြလာ
NUG အစိုးရ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များကို နိူင်ငံကြီး (၅)နိူင်ငံတွင် လက်ခံ ခန့်အပ်ထား